Seynisyahanno: Qof aan 30 sano dhaafin 'carruurnimo kama bixin' - BBC News Somali
Seynisyahanno: Qof aan 30 sano dhaafin 'carruurnimo kama bixin'
Image caption Inta badan dalalka caalamka wuxuu sharcigoodu dhigayaa in qofkii gaara 18 sano uu ka baxay carruurnimo
Hadda waxaa laga yaabaa inaad heshay sabab rasmi ah oo ku aaddan waxa adigoo da'daas jira aad ugu dhaqmi la'dahay sidii qof weyn.
Dadku si buuxda uma "qaan gaaraan" ilaa ay da'dooda dhaafto 30 sano, sida ay qabaan seynisyahannada dhinaca maskaxda.
Laakiin khubarada Seyniska ee daraaseeya maskaxda iyo neerfaha ayaa sheegay in da'da lagu qaan gaaro ay qof walba u tahay mid gaar ah.
Image caption Seynisyahannadu waxay sheegayaan in qof walba ay si gaar ah isbaddal u sameyso maskaxdiisa
Barfasoor Peter Jones oo wax ka dhiga jaamacadda Cambridge ayaa yidhi: "Waxa aan runti sheegeyno waa qeexitaan caddeymo wata oo ku saabsan marka aad ka gudbeyso carruurnimada ee aad noqoneyso qof qaangaar ah".
"Waa qaab dhismeed isbaddala oo qaata muddo 30 sano ah", ayuu yidhi.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaas ku daray: "Waxay ila hadalay waxyaabaha la xiriira cilmiga sida waxbarashada, caafimaadka iyo sharciga waxay ku haboon yihiin in qeexitaan rasmi ah ay yeeshaan".
Marka ay da'daadu gaarto 18 sano, waxaad xaq u leedahay inaad cod ka dhiibato doorashada, inaad noloshaada go'aan ka gaarto, sidii qof weyn ayaana laguula dhaqmayaa marka ay dambi kugu helaan booliska.